YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, October 20
U.S. Weighing Reengaging with Myanmar
20 Oct ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/hmgasv9 20 Oct news Summary only...
" Grand Opening Ceremony of BuddhRamsi Temple" in BC, Canada.
http://ifile.it/qc78gpu Grand Opening Ceremony of BuddhRamsi Temple Summary only...
ယနေ့ ၂၀ ရက် အင်္ဂါနေ့ ထုတ်သတင်းစာမျက်နှာဖုံးများတွင်တရုတ်ပြည်သို့ ထွက်ခွာသွားသောတင်အောင်မြင့်ဦးအားတပ်ချုပ်ကြီးနှင့် အတူပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်သည့်ပူးတွဲတပ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး ရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကထီးမှာ ဆင်ဆာဖြတ်ခံလိုက်ရပြီး တပ်ချုပ်ကြီး ကိုမိုးပေးထားသောထီးတချောင်းကိုသာ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်အောင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးကြပေမဲ့သေချာတာကတော့ရွှေရွှေဘုရင်ရူးရူးနေတာပါပဲ....
http://ifile.it/k5ioj28 UBST Movement. Summary only...
Burma Human Rights Campaigner to Arrive in Canada
Burma Human Rights Campaigner to Arrive in Canada Canadian Friends of Burma Ottawa (October 20, 09) – Young Burma’s human rights campaigner Zoya Phan is to arrive in Ottawa to participate in the Writers Festival on Oct. 24. She will talk about “the Struggle for Freedom in Burma,” along with Canadian author Karen Connelly. They both recently authored two books: “Little Daughter” by Zoya Phan and “Burma Lessons” by Karen Connelly. Please see detailed event info at http://www.writersfestival.org/events/Oct%2024.pdf Zoya Phan,acampaign coordinator for Burma Campaign UK, will also attendanumber of Burma events in Ottawa, Toronto and London (Ont.) from October 24 to 30. Zoya Phan was born in the remote jungles of Burma to the Karen tribe. At age 13, her peaceful childhood was shattered when the Burmese army attacked. She found shelter ataThai refugee camp, where she stayed until 2005. Then she came to the U.K. and claimed asylum. There she became the public face of the Burmese people's fight for freedom. She is also the youngest special guest speakers to UK Conservatives Party Convention in 2006 and 2007. Please see her speeches. Burma: Zoya Phan at the Conservative Conference 2006 http://www.youtube.com/watch?v=PPbuTdpMdZA Burma: Zoya Phan at the Conservative Party Conference 2007 http://www.youtube.com/watch?v=WW4fd8pUblM ________________________________________ The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma . Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org Summary only...
" Grand Opening Ceremony of BuddhRamsi Temple" in...
ဖတ်ရှု့စရာ.... သည်အမျိုးသမီး ( မြန်မာစာတမ်းထိုး) HD ဒေါင်းလုပ်ရန် ကြပ်ပြေးနန်းတွင်း အရှုပ်တော်ပုံ [အမှတ် ၁ မှ ၂၆ အထိ] ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ (အပိုင်း၁ မှ ၆၉) လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံများ(၃၁၀) ဘာလဲဟဲ့ လူငရဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဘီလ်ရစ်ချဒ်ဆန် စကားဝိုင်း ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း “ မြန်မာ့ဖက်ဒရယ် ” BURMA VJ “ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံသမိုင်း ” မြန်မာ E BOOKS ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ (အပိုင်း-၁) (အပိုင်း-၂) (အပိုင်း-၃) (အပိုင်း-၄) (အပိုင်း-၅) မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ တကယ့် သူရဲကောင်းများ ဗိုလ်မိုးကြိုး အပြန် နောက်ကြောင်း လှန်လိုက်သည့် ဗိုလ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ဘန်ကောက်မြို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် သွေးသောက်ပွဲ ဗိုလ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းခြင်း၊ ညီမျှမှု ဆိတ်သုဉ်းခြင်း ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာ ခံဖူးသလား နှင့် အခြားထောင်ဝတ္တုတိုများ ဦးနု - တာတေစနေသား freedom from fear(assk) အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ ကိုဒေါင်း(မောင်ထင်) နန်းတွင်းသူခိုးနှင့်မိန်းမစိုး(ရွှေဘိုမိမိကြီး) မသိန်းရှင်ဆီပို့ပေးပါ ရယ်စရာ မောစရာ - နိုင်ငံရေးဟာသများ ကြေးမုံဦးသောင်း - နေ၀င်းဧ။်ပြာတဆုပ် ကြေးမုံဦးသောင်း - ဗိုလ်နေ၀င်းဇာတ်လမ်းရှုပ်သမျှ အာဏာရှင်ကြီးများဧ။်အတွင်းရေး
အရှေ့ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ (ပထမတွဲ)-သိန်းဖေမြင့် အရှေ့ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ(ဒုတိယတွဲ)-သိန်းဖေမြင့် ဦးနု - တာတေစနေသား အစွန်းနှစ်ဖက်ရပ်၍ရင်ခုန်ခြင်း မန်ာဟရီ၏ရင်ခတ်သံများ ကျမ၏သေတမ်းစာ......မနော်ဟရီ....... ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ....ဂျူး....... အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများ...ဂျူး.... အမှတ်တရ...ဂျူး... ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့အတောင်ပံ....ဂျူး... ရေခဲအိမ် မြသန်းတင့်(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်)
သော်တာဆွေ(ဘရန်ဒီတပုလင်း) ငါပြောချင်သမျှငါ့အကြောင်း(ဒေါက်တာသန်းးထွန်း) ဒွီဗွီဒီလေး တချပ်ရဲ့ ပုံပြင် မင်းတုန်းမင်း (၁၈၅၃ - ၁၈၇၈) သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ ကုန်းဘောင်နှောင်းခေတ် (၁၈၅၂ - ၈၅) မြန်မာ ပညာတော်သင်များနဲ့ ပညာသင် လူစာရင်း ဘုရား သီပေါမင်း (၁၈၇၈ - ၁၈၈၅) နှင့် ကုန်းဘောင်ခေတ် နိုင်ငံခြား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး သမိုင်းတွင်တော့မည့်အချစ်ဇတ်လမ်းတပုဒ်
သမိုင်းတကွေ့မှ သခင်သန်းထွန်း အောင်ဆန်းသူရိယဗိုလ်တိုက်ချွန်း ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် ဂျူး၏ဝတ္တုတို ၃၆ပုဒ် ကြည်ဦး (၁၉၂၅ - ၂ဝဝ၉) မြန်မာ လူမျိုးထဲမှ ဘုရင်ခံ ဖြစ်ခဲ့သူ ဆာဂျေအေမောင်ကြီး သမ္မတကြီးဒေါက်တာဘဦး စုံထောက်မောင်စံရှား(ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း) ပျူသင်းချိုင်းစာများ သတင်းစာများကပြောသော ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် အမှု ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့်သီလရှင်မယ်ကင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမိုင်းဝင် မိန့် ခွန်း ကျောင်းသား - ထောင် - တော်လှန်ရေးသမား ( ရဲဘော်သံချောင်း) ၁၉၈၈ - ၂၀၀၂ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှု ရက်စွဲမှတ်တမ်းများ ဗမာ့အောင်ဆန်း ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးပြသာနာ အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် သခင်တင်မြ သို့မဟုတ် မိမိ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ဘယ်ခေတ်ကို မဆို သစ္စာ ဖောက်ဝံ့သူ။ ဂန္ဒီခန်းမ၊စင်ပြိုင်အစိုးရနှင့်ဘ၀တကွေ့နိုင်ငံရေး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုအားတရားစွဲဆိုခဲ့စဉ်က ဂဠုန်ဦးစောနှင့် စုဖုရားလတ်၏ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက် တစ်ဖက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် ဗမာ့တော်လှန်ရေး ညီလာခံပျက်ရခြင်းအနှစ်ချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းအပေါ်NLDသဘောထား CRPP၏သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများ CRPPဆိုတာဘာလဲ...... ဒုတိယပင်လုံ သားသတ်သမားစိန်လွင် ငဇင်ကာနှင့်သီတာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ကိုယ်တိုင်ရေးဘ၀ဇာတ်ကြောင်း စုဘုရားလတ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဧ။် အမွိုင်သို့လျှိူ့ဝှက်ခရီး ကြေးမှုံဦးသောင်း - ဦးနေ၀င်းနှင့် လက်မရွံ့ အာဏာသားများ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုဘယ်သူသတ်တာလဲ.... ဗိုလ်မိုးကြိုး အပြန် နောက်ကြောင်း လှန်လိုက်သည့် ဗိုလ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၏နိုင်ငံရေးဖွင့်ဆိုချက်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းများ သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ တော်ဘုရားလေးဦးအောင်ဇေ ရတနာပုံမှရတနာဂီရီ စုဖုရားလတ် ရှင်းတမ်းနှင့် ပါတော်မူဖြစ်ရပ်များ ဦးဥတ္တမ ပါလီမန်ခေတ် ဥပဒေအတွင်း တိုက်ပွဲတခုမှမြှပ်ကွက်တခု
ကျောင်းသားဝတ္တရား အရေးတော်ပုံလေးစောင်တွဲ မြန်မာပြည်အုပ်ချူပ်ရေးသမိုင်း(ဒေါက်တာသန်းထွန်း) ရှေးမြန်မာတို့ဝမ်းစာရှာပုံ ရုန်းထွက်မှု၏အော်ညီးသံ(သို့မဟုတ်)ချောအိသိန်း၏တိုက်ပွဲခေါ်သံ ဦးအောင်ရွှေနှင့် မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများ အမေ့ခံမိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးသောင်း (အောင်ဗလ) တပင်ေ႟ရွှထီး (၁၅၃၁ - ၁၅၅၀) နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည် စည်းလုံးပေးခဲ့သူ ဘုရင့်နောင် (၁၅၅၁ - ၁၅၈၁) ရွှေတောင်မင်း နှင့် ကနောင်မင်း ညီလာခံတွင် ပုဆိုးကျွတ်ကျသည့် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ရဲဘော်သုံးကျိတ် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (တကသ) တကသ စည်းမျဉ်း ရေးဆွဲခဲ့စဉ်က မန္တလေးကအာဇာနည်၁၇ဦး ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး 8888(12345) ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်များ ဗိုလ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းနားဆင်ရန် ၁၉၆၂ဂျူလိုင်7သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံများ ဗိဿနိုး မြို့ဟောင်း တူးကြရအောင် ဟန်လင်း မြို့ဟောင်း တူးကြရအောင် တကောင်း မြို့ဟောင်း တူးကြရအောင် သရေခေတ္တရာ မြို့ဟောင်း တူးကြရအောင် အာဆီယမ်ပဋိဉာဉ်စာတမ်း(မြန်မာပြန်) ....ဖတ်သင့်သည်.... ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၂ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၃ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၎ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၅ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၆ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၇ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၈ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၉ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၀ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၁ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၂ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၃ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၄ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၅ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၆ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ၁၇ ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၁၈) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၁၉) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၀) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၁) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၁မှ၂၁ပေါင်းချူပ်) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၂) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၃) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၅) ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၂၆) မြန်မာ့သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးလာဒ်စားမှု အကိုကြီးတော့ အဖအရာ။ အကြီးကောင်က အဖေထက် သားနှစ်လကြီးတယ် ကုလားသွေးပါသော သားကလေး၏ အဖေရှာပွဲနှင့် ဆက်စပ်နေသော ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကြီး ရုရှား+မြန်မာ(နုကလီယား) ၈၈၈၈တော်လှန်ရေးပုံရိပ်များ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သမိုင်းအကျဉ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အားSPDC၏တိုက်ခိုက်မှုများ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းအပေါ်NLDသဘောထား ‘၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်’ အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်အား နအဖ စစ်အုပ်စု၏ တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းမှုများ အကျဉ်း ပထမပင်လုံစာချူပ် ဒုတိယပင်လုံ CRPPဆိုတာဘာလဲ...... CRPP၏သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု အစီရင်ခံစာ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုကြီး Popular Posts
လူပျောက်ကြော်ငြာခဲ့သည့် မိန်းကလေးအား အလောင်းအဖြစ် ပြန်တွေ့
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့်မန္တလေး ဘူတာရုံ ဖြစ်စဉ်အမှန်
ဒူဘိုင်းသွားမယ့် မြန်မာမလေးများ သတိထား
မအေးမြအောင်နဲ့ အဆိုတော်ရဲလေး မင်္ဂလာဖိတ်စာ
ဓမ္မစေတီလမ်းနဲ့ လင့်လမ်းထိပ်က ဒုတပ်ကြပ်ခင်မြင့်မောင်ရဲ့ စတိုင်သစ်.....
ချက်တင်မှာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို လွယ်လင့်တကူ မယုံကြည်သင့်
မီထ္ထီလာတရားခံတဦးဖြစ်သူ ညီညီနိုင် ရဲ. ထွက်ဆိုချက်
Dr.Web Anti-virus Life license v8.00.0 Apk
Send Facebook Chat Stickers From Google Chrome Using Facemoji
Lichen Planus of the Mouth ပါးစပ်နာတမျိုး
သစ်ဆန်း( Software King )
Screen Resolution ထဲက 4K Resolutionအကြောင်း
.: Ko Moe's Electronics Notes :.